Semalt: Lehilahy iray namoaka lahatsoratra telo tapitrisa Wiki
Eo am-piandohan'ity lahatsoratr'i Oliver King ity Semalt Mpitarika Success Manager, dia hilaza aminareo momba ny rindrambaiko nataon'i Svenker Johansson izay namorona lahatsoratra an-tapitrisany tao Wikipedia, ary ny fomba nahatonga azy ho iray amin'ny mpamoaka lahatsoratra malaza sy marefo amin'ity tranonkalan'ny rakipahalalana ity. Ity mpampianatra matihanina amin'ny teny Swedish ity dia fantatra be hoe Lsj. Noforonin'i Lsjbot, tonian-dahatsoratry Wikipedia, izy, izay nanampy an'i Svenker hamorona lahatsoratra marobe ho an'ny teny Soedoà
Hatramin'izao, Lsjbot dia nahavita namorona lahatsoratra telo tapitrisa tamin'ny fiteny samihafa tao amin'ny Wikipedia ary namoaka fanovana mihoatra ny folo tapitrisa. Johansson dia miteny fa ny tanjona lehibe indrindra dia ny mamorona lahatsoratra momba ny karazana biby sy zavamaniry samihafa, ary ny ankamaroan'ny fanovana nataony dia mifandraika amin'io asa io ihany. Indray andro nisy botsaka vitsivitsy tao amin'ny Wikipedia, saingy nanambara i Johansson fa mihamitombo hatrany izy ireo amin'izao fotoana izao ary tokony ho anisan'ny tetikasan'i Google sy Wikipedia.
Na izany aza dia misy fetrany ny zavatra azontsika atao amin'ny bots. Zava-dehibe ireo botsika satria manampy amin'ny fitazonana asa be dia be ary mamorona lahatsoratra samihafa ao amin'ny Wikipedia. Ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy dia lahatsoratra an-tapitrisany, ary ny bots ampiasaina hanamboarana vandalisma amin'ny ankapobeny. Na aiza na aiza manerana izao tontolo izao, dia hita fa nanamboatra sy nanavao ny zavatra taloha izy ireo, ny famandrihana ireo adihevitra efa misy, ny fanovana ny sokajy lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia ary ny mampiditra mari-pamantarana marina amin'ny tatitra momba ny olana momba ny olana..
Manoratra ny tantaran'ny NASA ve ny robots?
Ny iray amin'ireo loza goavana amin'ity fomba fiasa ity dia ireo lahatsoratra mifarana amin'ny tantaran'ny NASA. Betsaka ny olona mino fa namorona ireny lahatsoratra ireny ny bots ary maro ny fandaharam-pamokarana noraisina tamin'ny famoahana azy ireo. Tamin'ny taona 2008, nisy ny algorithome fantatra amin'ny anarana hoe ClueBot II nahomby nanoratra lahatsoratra dimy arivo an'ny Wikipedia momba ny asterôida. Maneritery fotsiny ny angona ho an'ny daholobe sy ny fampahalalana vaovao avy amin'ny rakitra NASA amin'ireo lahatsoratra Wikipedia. Ireo lahatsoratra ireo dia novolavolan'ireo bots, izay nanova ny marika ary nampifandray azy ireo ho backlinks . Nanova ny dikan-teny Anglisy amin'ny lahatsoratra Wikipedia ho toy ny dikan-teny sinoa ireo bots ireo. Tamin'ny 2012 dia nofoanana io famoronana io, ary ny olombelona no nanao ny asa rehetra
Ny bots na robot dia mandeha amin'ny alàlan'ny fankatoavana manokana
Nanome ohatra sasantsasany momba an'i Cluebot i Erik Moller, tale lefitra sy mpandray anjara ao amin'ny Wikimedia Foundation, izay tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ilay tranonkala. Milaza izy fa ny politikam-pifanarahana dia mifehy ny fampiasana robots na bots amin'ny Wikipedia. Nolazainy tamin'ny Guardian fa tsy ny botsika rehetra no afaka miezaka miasa amin'io rakitra goavam-be io noho ny toerana voafetra, ny endriny, ary ny safidy. Ny ankabeazan'ireo botsika dia mandalo amin'ny paikady hentitra izay mahatonga ny fanapahan-kevitra noraisin'ny olombelona raha toa ka misy dikany ny asa ataony na tsia. Ny botsika izay zara raha mahavita ny asa atao tsy ilaina dia na tsy ankatoavina avy hatrany na atokana mandritra ny androm-piainany.
Moller koa dia manaiky fa ny tahiry voakolokon'ny Wikipedia sy ny tetikasany dia voatahiry amin'ny fomba samihafa, izay manampy amin'ny fampivoarana ny zava-drehetra sy hampihenana ny mety ho an'ny fahadisoana ataon'ny olona amin'ny fanavaozana sy fametrahana ireo tarehimarika.
Wikipedia dia iray amin'ireo tranonkala manana lahatsoratra marobe. Johansson dia niaro ny fampiharana ny lahatsoratra an-tapitrisany irery, milaza fa nampiasa tamim-pahendrena ny robots sy bots izy ary nahazo azy ireo fankatoavan'ny manampahefana ambony alohan'ny fampiasana azy ireo amin'ny Wikipedia Source .